Soo dejiso barnaamijkan aan u dhisnay si aan u hagaajino barnaamijkeenna? | Martech Zone
Macaamiishayadu waxay uga faa'iideystaan ​​PCA meelkasta arrimaha taageeradooda. Waxaan wadaa Vista - markaa markii aan isku dayay inaan rarro macmiilkeena rukhsadda haysta, waxaan si dhakhso leh ula kulmay fariin aan is waafaqi karin oo rakiibku joojiyay.
Booqashada goobta Symantec, waxay dabcan ku xalliyeen arrinta iswaafajinta an casriyayn nooca 12.1. Cunnada Waa inaad bixisaa $ 100 casriyaynta. Waa inaan haystaa, markaa waxaan bixiyay $ 100. Bixinta $ 100 codsi si fudud u shaqeynaya ka dib markii aad bixisay liisanka hore ee hore ayaa runtii kugu filan inaad kaa xanaajiso
Hadda oo aan haysto 12.1, waxaan hayaa tanno dhibaatooyin ah. Barnaamijku wuxuu umuuqdaa inuu soconayo hadaan fiiriyo Maamulaha Hawsha, laakiin daaqadda meelna lagama helin. Haddiise aan daaqadda ka kaco, gebi ahaanba waa bannaan tahay. Waxaan bilaabay inaan ku baaro arinta golayaasha Symantec. Hal qoraal oo aan helay wuxuu ahaa maqaal weyn oo ku saabsan Symantec Autofix barnaamijka.
Shirkad softiweer noocee ah ayaa qorta barnaamij hagaajiya arrimaha saameeya barnaamijkoodii asalka ahaa? Waxaan u maleynayaa in Symantec uu noqon lahaa shirkaddaas.
Hey Symantec: Haddii aad ogtahay waxa dhibaatadu tahay iyo sida loo saxo, hagaajintaada geli asalka ah dalab !!!
Kadib rakibida barnaamijka Autofix, PCA meelkasta wali waxay kusii socotaa arimaha. Aniga gariir marka ay tahay inaan isticmaalo barnaamij kasta oo Symantec ahIn badan ayaan wax ka qorayey.
Tags: kaararkaqalabka iphonemawduuca iphonejaamarkawarshadaha mobiladaadvertising dibaddaadmin
May 10, 2008 at 8: 59 AM
Windows Vista… bilowga dhamaadka Microsoft?
Aug 22, 2008 at 5: 58 AM
Haddii aad tan si joogto ah u heleyso, iskuday waxyaabaha soo socda:
- Launch sessioncontroller.exe - tan waxaad ka heli doontaa barnaamijka ku rakib buugga.
- sug dhowr ilbiriqsi
- ka dibna laba jeer guji oo bilow pcAnywhere (winaw32.exe)
Shaashadda maran ayaa sabab u ah pcany meel ay ka baxayso sugitaanka sessioncontroller.exe in la bilaabo.
Tan waxaa lagu hagaajiyay 12.5 - oo hadda ku jirta Beta at http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
Oktoobar 22, 2008 at 5:05 PM
Waayahay, weyn great marka laga reebo in cusboonaysiin kasta oo .5 ah (iyo qaar ka mid ah cusboonaysiinta .1) ay yihiin khadad alaab gooni ah, oo u baahan iibsi dheeri ah. $ 200 (xitaa $ 100 "dib u habeyn"), waxaan rajeynayaa in sheygeyga softiweerku shaqeeyo, sanduuqa ka baxo, oo aan wax dhib ah ka jirin. Isla markiiba. Ma aha ka dib markaad sugto 6 bilood, ama xitaa ka dib markaad sugto 30mb oo cusbooneysiin ah oo ka socda nidaamkooda LiveUpdate… taas oo, si xiiso leh ugu filan, kaliya ay aragto qayb ka mid ah barnaamijyadooda software. Muxuu u cusbooneysiin waayey * dhammaan * barnaamijkeyga 'Symantec' hal mar, halkii looga baahan lahaa 7 tusaale oo kala duwan oo LiveUpdate ah oo loogu talagalay 7 badeecooyin kala duwan oo isla shirkad ah?
Dib ugu noqoshada gripe-ga asalka ah… maxaan ku qasbanahay inaan bixiyo lacag dheeri ah si aan u helo waxa ugu yaraan, ugu yaraan ahaan lahaa balastar loo sii daayay dadka isticmaala 12.1, nevermind 12.0 (oo aan ka shaqeyn Vista)?